ဈေးနှုန်းနဲ့ တင်ရူးခါရလောက်တဲ့ ယမကာလုလင်တို့ရဲ့ ထိပ်ခေါင်သခင် (သို့) ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး စကော့ဝီစကီ မက်ကယ်လန် ⋆ The Ginger Media
ဈေးနှုန်းနဲ့ တင်ရူးခါရလောက်တဲ့ ယမကာလုလင်တို့ရဲ့ ထိပ်ခေါင်သခင် (သို့) ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး စကော့ဝီစကီ မက်ကယ်လန်
ကျွန်တော့်မှာ အိပ်မက်တစ်ခုရှိတယ်၊ တစ်နေ့မှာ ဒီလို ဈေးအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ ၀ီစကီကို ဖန်ခွက်ထဲထည့်ပြီး၊ ဆရာကြီးတကာ့ ဆရာကြီးထိပ်ခေါင်ကို ပူဇော်နိုင်ရမယ်။ ဒီစကားကို ပြောချင်နေတဲ့ ယမကာလုလင်တွေဟာ ရွှေမြန်မာပြည်ကြီးမှာ ထုနဲ့ထည်နဲ့ ရှိပါတယ်။
သစ္စာအရှိဆုံးဆိုတဲ့အရာကို ပူဇော်ရတာမလား။ သမိုင်းကြောင်းကို အခါအခွင့်သင့်လို့ လှန်ပြရမယ်ဆိုရင် ဈေးအကြီးဆုံးလို့ ဖြစ်လာမယ့် အရက်ကို
(၁၉၂၆)မှာ စပေါင်းခံပါတယ်။ နှစ် (၆၀)အကြာ ဂူအောင်းသိုင်းကျင့်ပြီးချိန်မှာတော့ (၁၉၈၆) နှစ်မှာ နိုင်ငံတကာ စံမီတဲ့ ပုလင်းထဲကို ထည့်ဖို့ စဉ်းစားပါတော့တယ်။
ခက်တာက ရိုးရိုးတန်းတန်းမလုပ်ဘဲ နည်းနည်းဆန်းရမှကြိုက်တဲ့ ကိုယ်တော်တွေက ပုလင်းတိုင်းကို သီးသန့်ပုံဆွဲပြီး တံဆိပ်တပ်ပါတော့တယ်။ ကမ္ဘာကျော် ဘီတဲလ်အဖွဲ့ရဲ့ အယ်လ်ဘမ် “Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band” ရဲ့ ကာဗာကို ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တဲ့
ဗယ်လာရီဒို အဒါမီ နဲ့ ပီတာဘလိခ်တို့က ပုလင်းရဲ့ကာဗာဒီဇိုင်းတွေကို သီးသန့်တာဝန်ပြီး ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ အများကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်ကို ပြည့်ဝစစ်မှန်တဲ့ (၁၂)လုံးတည်းရှိတဲ့ စကော့ဝီစကီပုလင်း (၁၂)လုံးကို ဒီဇိုင်းဆွဲပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပုလင်း (၁၂)လုံးကို စကော့ရဲ့ အရေးတကာ့အရေးကြီးဆုံး ဖောက်သည်တွေကို ပေးခဲ့ပြီးနောက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်ရောက်ပြီး၊ ဘယ်နှစ်လုံးကျန်ခဲ့လဲဆိုတာကို ဘယ်သူမှမသိတော့ပါဘူး။
တစ်လုံးက ဂျပန်ပြည်မှာ ငလျင်က နားမလည်၊ ပါးမလည် လှုပ်တော့ပါသွားပြီသိရသလို တစ်လုံးကိုတော့ အောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးပြီလို့ဆိုပါတယ်။ အခု စကော့ဝီစကီကို တရားဝင်နာမည် မက်ကယ်လန် (Macallan)လို့ ခေါ်ပြီး၊
ယူကေမှာ ပေါင်(၈၄၈ ၇၅၀)၊ ဒေါ်လာ (၁.၁)သန်း နဲ့ အမည်မသိသူတစ်ဦးက၀ယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကြမ်းခင်းဈေး ပေါင်(၇)သိန်းနဲ့စခဲ့ပြီး၊ ပြောခဲ့တဲ့ဈေးမှာဈေးတည့်သွားတာပါ။
ကံကောင်းတာက အရင်ဘုမသိဘမသိ ပိုင်ရှင်က အီတလီကိုမင်္ဂလာဆောင်သွားရင် တက္ကစီပေါ်ကျန်ခဲ့လို့ (ပျောက်ရင်တော့ ယမကာလုလင်တွေ အသည်းကွဲမယ့်ကိန်း) လေနဲ့အရင်ရောင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အခုတော့ ပိုင်ရှင်ရှိသွားပြီဖြစ်သလို ကမ္ဘာမြေပေါ်က တစ်နေရာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ အစောင့်အရှောက်တွေနဲ့ ဆရာကြီးတစ်ယောက် အေးအေးလူလူရှိနေမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ ဆရာကြီးရဲ့သက်တမ်းက နှစ်ပေါင်း (၉၀)လောက်ရှိနေပါပြီ။
ကြှနျတေျာ့မှာ အိပျမကျတဈခုရှိတယျ၊ တဈနမှေ့ာ ဒီလို စြေးအကွီးဆုံးဆိုတဲ့ ၀ီစကီကို ဖနျခှကျထဲထညျ့ပွီး၊ ဆရာကွီးတကာ့ ဆရာကွီးထိပျခေါငျကို ပူဇျောနိုငျရမယျ။ ဒီစကားကို ပွောခငျြနတေဲ့ ယမကာလုလငျတှဟော ရှမွေနျမာပွညျကွီးမှာ ထုနဲ့ထညျနဲ့ ရှိပါတယျ။
သစ်စာအရှိဆုံးဆိုတဲ့အရာကို ပူဇျောရတာမလား။ သမိုငျးကွောငျးကို အခါအခှငျ့သငျ့လို့ လှနျပွရမယျဆိုရငျ စြေးအကွီးဆုံးလို့ ဖွဈလာမယျ့ အရကျကို
(၁၉၂၆)မှာ စပေါငျးခံပါတယျ။ နှဈ (၆၀)အကွာ ဂူအောငျးသိုငျးကငျြ့ပွီးခြိနျမှာတော့ (၁၉၈၆) နှဈမှာ နိုငျငံတကာ စံမီတဲ့ ပုလငျးထဲကို ထညျ့ဖို့ စဉျးစားပါတော့တယျ။
ခကျတာက ရိုးရိုးတနျးတနျးမလုပျဘဲ နညျးနညျးဆနျးရမှကွိုကျတဲ့ ကိုယျတျောတှကေ ပုလငျးတိုငျးကို သီးသနျ့ပုံဆှဲပွီး တံဆိပျတပျပါတော့တယျ။ ကမ်ဘာကြျော ဘီတဲလျအဖှဲ့ရဲ့ အယျလျဘမျ “Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band” ရဲ့ ကာဗာကို ဒီဇိုငျးဆှဲခဲ့တဲ့
ဗယျလာရီဒို အဒါမီ နဲ့ ပီတာဘလိချတို့က ပုလငျးရဲ့ကာဗာဒီဇိုငျးတှကေို သီးသနျ့တာဝနျပွီး ဆှဲခဲ့ပါတယျ။ အမြားကွီး မဟုတျပါဘူး။ တကယျ့ကို ပွညျ့ဝစဈမှနျတဲ့ (၁၂)လုံးတညျးရှိတဲ့ စကော့ဝီစကီပုလငျး (၁၂)လုံးကို ဒီဇိုငျးဆှဲပေးခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ထုတျလုပျခဲ့တဲ့ ပုလငျး (၁၂)လုံးကို စကော့ရဲ့ အရေးတကာ့အရေးကွီးဆုံး ဖောကျသညျတှကေို ပေးခဲ့ပွီးနောကျ ကမ်ဘာပျေါမှာ ဘယျရောကျပွီး၊ ဘယျနှဈလုံးကနျြခဲ့လဲဆိုတာကို ဘယျသူမှမသိတော့ပါဘူး။
တဈလုံးက ဂပြနျပွညျမှာ ငလငျြက နားမလညျ၊ ပါးမလညျ လှုပျတော့ပါသှားပွီသိရသလို တဈလုံးကိုတော့ အောငျပှဲခံခဲ့ပွီးပွီလို့ဆိုပါတယျ။ အခု စကော့ဝီစကီကို တရားဝငျနာမညျ မကျကယျလနျ (Macallan)လို့ ချေါပွီး၊
ယူကမှော ပေါငျ(၈၄၈ ရ၅၀)၊ ဒျေါလာ (၁.၁)သနျး နဲ့ အမညျမသိသူတဈဦးကဝယျသှားခဲ့ပါတယျ။ ကွမျးခငျးစြေး ပေါငျ(၇)သိနျးနဲ့စခဲ့ပွီး၊ ပွောခဲ့တဲ့စြေးမှာစြေးတညျ့သှားတာပါ။
ကံကောငျးတာက အရငျဘုမသိဘမသိ ပိုငျရှငျက အီတလီကိုမင်ျဂလာဆောငျသှားရငျ တက်ကစီပျေါကနျြခဲ့လို့ (ပြောကျရငျတော့ ယမကာလုလငျတှေ အသညျးကှဲမယျ့ကိနျး) လနေဲ့အရငျရောငျးခဲ့ရတယျလို့ဆိုပါတယျ။
အခုတော့ ပိုငျရှငျရှိသှားပွီဖွဈသလို ကမ်ဘာမွပေျေါက တဈနရောမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ အစောငျ့အရှောကျတှနေဲ့ ဆရာကွီးတဈယောကျ အေးအေးလူလူရှိနမေယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ အခုဆိုရငျတော့ ဆရာကွီးရဲ့သကျတမျးက နှဈပေါငျး (၉၀)လောကျရှိနပေါပွီ။